बरको रुखलाई श्रीमानकै सम्मान दिएर मनाइयो बटसावित्री : RajdhaniDaily.com -
Home समाज बरको रुखलाई श्रीमानकै सम्मान दिएर मनाइयो बटसावित्री
सप्तरी, राजविराज । पतिको दीर्घ जिवन तथा सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै नवविवाहित युवती देखि वृद्घा सम्मले मनाउने बटसावित्री पर्व यस पल्ट लकडाउनका कारण अधिकांशले घरमै मनाएका छन् ।
कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट बच्नका लागि बरको रुखमुनि गई पुजा गर्ने परम्परालाई त्याग्दै मिथिलाञ्चलका अधिकांश महिलाले यस पल्ट घरमै गमलामा बरको रुख रोपेर बटसावित्री पर्व मनाएका हुन ।
धेरै जनाले घरमै बटसावित्री पर्व मनाँई रहँदा नगरक्षेत्रका विभिन्न मन्दिर परिसरमा रहेको बरको रुखमुनी फाटफुट महिला मात्र पुजा गर्न पुगेको थिए । प्रशासनले घरमै बस्न तथा बाहिर ननिस्कन जारी गरेको सूचनालाई मध्यनगर गर्दै यस पटक बट साबित्री पर्व घरमै मनाएको राजविराज ४ की अनु महासेठले बताईन ।
उनले आफनो पतिको दीर्घ जिवन तथा सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै ब्रत बसेर बटसावित्री पर्व मनाएको बताईन ।
प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ औषीको दिन मनाउने यो पर्र्व विवाहित महिलाहरुका लागि विशेष महत्वको रहेको पंडित रुपकान्त मिश्रको मनाई छ । उनका अनुसार सावित्रीले आफनो मृत पति सत्यवानको पुर्नजिवनका लागि बरको रुखमुनी नै पुजा गरेपछि सत्यवानले पुर्नजिवन प्राप्त गरेको पौराणिक मान्यता रहेको छ ।
सावित्री आफना पतिको दीर्घ जिवनका लागि ब्रत बसेको दिन प्रत्येक वर्ष बटसावित्री पर्व मनाइने गरिएको उनको भनाई छ ।
बरको रुखलाई विवाहको लगन गाठोको प्रतिक रातो र पहेलो मंगलधागोले बेर्ने र सविधि पुजापाठ गरे पतिको आयु लामो हुने जनविश्वास रहेको छ । मिथिला संस्कृतिमा पतिलाई देउताको रुपमा पुजा गर्ने परम्परा पुरानो हो ।
सोही परम्परा अनुसार बर्षको १ दिन बरको रुखलाई पति जस्तै सम्मान दिई मिथिलाञ्चलका विवाहित महिलाहरुबाट सावित्री पर्व मनाउदै आएका छन् ।
खडेरीका कारण देशभर आगलागी भइरहँदा काठमाडौंको उत्तरतिर रहेको शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा आइतबार डढेलोले अनियन्त्रित रूप लियो । यसको नियन्त्रणका लागि विविध उपाय अपनाइए ।...
काठमाडौं । गायिका अबुन पाण्डेको शब्द, संगीत तथा स्वरमा 'प्रेम प्याला' सार्वजनिक भएको छ। गीतलाई एरेन्ज भने राजिव शाहले गरेका हुन् । सार्वजनिक गीतको...
काठेखोलामा रोजगार गुमाएकाहरुको अनलाइन तथ्याङ्क संकलन
बागलुङ । बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकाले कोरोना संक्रमणको कारण स्वदेश तथा विदेशमा रोजगार गुमाएका नागरिकको अनलाइन तथ्याङ्क संकलन सुरु गरेको छ । आगमी आर्थिक वर्षको लागि...
पार्टी एकता जोगाउन प्रवक्ता नारायणकाजीको आग्रह
Breaking News Kumar Raut - November 2, 2020 0
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी फुट्ने विषय उचित नहुने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रवक्ता...
स‌ंक्रमणमा बालबालिकालाई यसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ
Exclusive Dhruba Lamsal - August 23, 2020 0
युरोप, अमेरीका, चिनलगायतको तुलनामा १८ वर्षमुनिका बालबालिका बढी संक्रमित देखिएका छन् । एक साताअघिको तथ्यांक हेर्दा १८ वर्षमुनिका १५ प्रतिशत बालबालिकामा पोजेटिभ देखिएको छ...
Breaking News Roshan Shrestha - August 21, 2020 0
सुनाम, कुनाम वा बदनाम कुन रोज्ने ?
बिचार Kumar Raut - October 15, 2020 0
नामका पनि भेद छन् : कुनाम, सुनाम र बदनाम । जीवनकालमा समाज र राष्ट्रका लागि भलाइ हुने काम गर्ने व्यक्ति वा व्यक्तित्व प्रशंसनीय हुन्छन्...
Breaking News राजधानी समाचारदाता - April 15, 2021 0
Breaking News Dhruba Lamsal - February 23, 2021 0
प्रमुख भगवान गिरी - April 6, 2021 0
वरीयतामा नेपाल दुई स्थान तल
Not-to-be-missed Kumar Raut - March 28, 2020 0
काठमाडौं । नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टिम फिफा वरीयतामा दुई स्थान तल झरेको छ । विश्व फुटबलको सर्वाेच्च निकाय (फिफा)ले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको वरीयतामा...
भर्खरै Kumar Raut - November 26, 2020 0